एसएलसी नतिजाप्रति हेडसरहरुको प्रतिक्रिया - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
एसएलसी नतिजाप्रति हेडसरहरुको प्रतिक्रिया
० रमेशप्रसाद न्यौपाने
शिक्षा मानव जीवन परिवर्तन र स्वावलम्बी बन्ने संवाहक हो । राष्ट्र विकासको मेरुदण्डमा शिक्षाले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ । फलामे ढोका भनिने २०६८ सालको एसएलसी परीक्षाको जेठ ३१ गते परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा ४ लाख ९६ हजार २८ विद्यार्थी मध्ये २ लाख ८ हजार १ सय ८७ उत्तीर्ण भएका छन् । ४७ दशमलव १६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । राज्यले बजेटको १८ प्रतिशत रकम खर्च गरिएको अवस्थामा सहभागी भएका परीक्षार्थीमा आधा भन्दा पनि बढी परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुनु शिक्षाको लगानी बालुवामा पानी सावित भएको छ । नियमिततर्फ १ लाख ९७ हजार ३८ र एक्जाम्टेडतर्फ १० हजार ५ सय ४९ उत्तीर्ण भएका छन् ।
परीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम रिमाल भन्नुहुन्छ – यसपल्टको परीक्षा स्तरीय र मर्यादित भएकोले गत वर्षको तुलनामा ८.३४ प्रतिशत कम नतिजा आएको बताउनुहुन्छ । यसैगरी परीक्षा समितिका अध्यक्ष शिक्षा सचिव किशोर थापाले देशको राजनीतिक अस्थिरता, बेला बेलामा भएको सरकार परिवर्तन, बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापले नतिजा कम आएको बताउनुहुन्छ । यसैगरी शिक्षाविद्हरु शैक्षिक प्रणाली नै फेल भएको बताउँछन् ।
शिक्षाका सन्दर्भमा वर्षका अन्त्यमा मात्र एकले अर्कोलाई आक्षेप लगाउने,हल्ला गर्ने बहानाबाजी गर्ने कार्यले शिक्षा क्षेत्रको विकास र परिणात्मक उपलब्धी हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन नल्याई शिक्षा प्रणालीमा नै सुधार ल्याउनुपर्छ ।
आजको आवश्यकता भनेको दक्ष जनशक्तिको खाँचो हो । व्यवहारिक, स्वावलम्बी, प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । सरकारले सबै सरकारी विद्यालयहरुलाई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न गरी आवश्यक दरबन्दी पु¥याउनु जरुरत छ भने संस्थागत विद्यालयहरुलाई आवश्यक पर्ने परामर्श, अनुगमन शैक्षिक सुधार गर्न सबै बालबालिकाले समान एकै खालको शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउनु नै आजको आवश्यकता हो । सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकले परिवर्तनमुखी समयको माग अनुसारको शिक्षा प्रणालीलाई भरपूर सहयोग पु¥याउनु जरुरी छ । एसएलसी परीक्षामा काभ्रे जिल्लाबाट १ सय ३२ सामुदायिक र ६३ संस्थागत विद्यालयबाट ८ हजार २ सय ७७ परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा ५ हजार ६ सय ५७ उत्तीर्ण भई ६८.३५ प्रतिशत नतिजा ल्याउन सफल भएको छ । राज्यको प्रतिशतको तुलनामा काभ्रे बढी प्रतिशत ल्याएपनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा नियमित रुपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गरी राम्रो गर्ने विद्यालयलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था आजैदेखि थाल्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा एसएलसी परीक्षाफलको नतिजाको विषयमा काभ्रे जिल्लाका सरकारी, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक र प्रिन्सिपलहरुको भनाई यस्तो रहेको छ ।
फलामे ढोका मानिने एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएका आधा भन्दा बढी विद्यार्थी असफल हुनुका कारणहरु बताएदिनुहोस् न ।
ज्ञानबहादुर केसी, प्रिन्सिपल, सिद्धार्थ उच्च मावि, बनेपा
समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो देशको शैक्षिक प्रणाली नै दोषी छ । एकातिर सरकारी विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधारहरुको कमी, शिक्षक दरबन्दी पूरा नहुनु, सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुन नसक्नु हो । संस्थागत विद्यालयहरुको नतिजालाई मूल्यांकन गरेर हेर्ने हो भने ४७.१६% को दोब्बर राम्रो हुन्छ । परीक्षा प्रणाली चुस्त, दुरुस्त र मर्यादित हुन सकेको छैन र शिक्षक, विद्यार्थीहरु अनुशासित र इमान्दारीपूर्वक शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्नमा कमी आएकोले विद्यार्थीहरु कम उत्तीर्ण भएका हुन् ।
विष्णुप्रसाद दाहाल, प्रिन्सिपल ज्ञानकुञ्ज उच्च मा.वि., बनेपा
प्रमुख दोषीको रुपमा हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली नै हो । त्यसो भनेर अरु पक्ष चाहिँ कम जिम्मेवार छन् भन्ने चाहिँ होइन । सबभन्दा बढी जिम्मेवारी त शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक नै हो । सबैले आ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे परीक्षामा सफलता हासिल गर्न कुनै कठिन छैन । विद्यार्थीहरु परीक्षाको मुखमा आएपछि मात्र अध्ययन गर्ने, नियमित गृहकार्य नगर्ने, विद्यालयले निर्धारण गरेको अनुशासन पालना नगर्ने कारण नै विद्यार्थीहरु असफल भएका हुन् । त्यसैकारण हाम्रो देशको शैक्षिक अवस्थामै सुधार गर्नुपर्छ ।
हिरा शर्मा नेपाल, प्रिन्सिपल, विद्यासागर इङ्गलिस सेकेण्डरी स्कुल
एसएलसी परीक्षामा सहभागीमध्ये आधाभन्दा बढी परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा सबै दोषी छन् । क्रमशः शिक्षा प्रणाली, शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र त्यसमा अझ संचार माध्यम कोही कम छैनन् । एक वर्ष अवधिमा ११ महिना चुप लागेर बस्ने १ महिना पनि हल्ला गर्ने, अध्ययन र अध्यापन कार्यमा मूर्त रुपमा अगाडि नबढ्ने परिपाटीको विकासले शिक्षा क्षेत्र सधैं उँभो होइन उँधो लाग्छ । सबैले आ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे एसएलसी परीक्षामा मात्र होइन सबैमा राम्रो नतिजा आउँछ । गाउँ गाउँमा दरबन्दी अनुसारको शिक्षक दरबन्दी मिलान हुनुप¥यो । शिक्षकहरुले राजनीति गर्न छोड्नुप¥यो ।
रामप्रसाद तिमल्सिना, प्रबन्ध निर्देशक, आदर्श विद्या मन्दिर सेकेण्डरी स्कुल, बनेपा
विद्यार्थी असफल हुनु भनेको जनु विषयमा असफल भएका छन्, त्यस विषयका शिक्षक असफल हुनु हो । अभिभावक, सम्बन्धित विद्यालय, समग्रमा भन्नुपर्दा देशको शिक्षा नीति र प्रणाली सबै दोषी छन् । त्यसमा पनि अझ भन्नुपर्दा विद्यार्थीहरु अनुशासित नहुनु, विद्यार्थीहरुको लागि शैक्षिक परामर्शको कमीकै कारण एसएलसीमा मात्र नभई शैक्षिक गतिविधिमा नै गम्भीर धक्का पुगेको छ ।
० एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरुमा आधा भन्दा बढी परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा सरकारी विद्यालय हो भनिन्छ नि ?
प्रल्हादप्रसाद तिमल्सिना, प्रधानाध्यापक, आजाद उच्च मावि, बालुवा
केही हदसम्म त मान्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको हकमा भन्नुपर्दा व्यवस्थापन समिति कुशल व्यवस्थापकीय कार्य प्रदर्शन गर्न नसक्नु, शिक्षकहरुको जागीरे मनोवृत्ति, विद्यार्थीहरुमा पढाइप्रतिको लगनशीलता नहुनु, देशको शैक्षिक प्रणाली दोषी हुनु, सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नियमित अनुगमन नहुनु, शिक्षकहरु विद्यार्थीहरुको पढाइमा भन्दा राजनीतिमा बढी सक्रिय भएका कारण र सबै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक कोटा अनुसारको दरबन्दी मिलान नभएकोले एसएलसी परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थी कम उत्तीर्ण भएका हुन् । यसलाई सुधारको खाँचो छ ।
वेदप्रसाद कोंजू, प्रधानाध्यापक, सञ्जीवनी नमूना उच्च मावि
सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भनेका अधिकांश विद्यार्थीहरु विपन्न निम्न आय भएका हुन्छन् । त्यसमा पनि घरको काम भ्याएर घरपरिवारलाई खाना बनाई आफू खाएर विद्यालय आउने वातावरण छ । अभिभावकले आफ्ना बाबुनानीहरुले नियमित गृहकार्य गरेका छन् कि छैनन् त्यसको हेरचाह नहुने । संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गराउने विद्यार्थीहरु सामान्य र उच्च वर्गका छोराछोरीहरु हुन्छन् । तिनीहरुलाई अभिभावकले नियमितमा हेरचाह गर्ने, घरदेखि अझ स्कुल बससम्म पनि आफै पु¥याउन जाने गर्छन् । नेपाल सरकारले गत श्रावणतिर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने टेष्ट परीक्षामा सबैलाई पास गर्नुपर्ने सर्कुलर जारी ग¥यो । यसले गर्दा पनि सरकारी विद्यालयको नतिजा खस्केको हो । संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले ल्याएको डिस्टिङ्शन र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ल्याएको तृतीय श्रेणी यसले जित्छ किनकि सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संघर्षशील अवस्थाबाट व्यवहारिकमा रही शिक्षा ग्रहण गरेका हुन्छन् । संस्थागत विद्यालयले हाउभाउ र बढी निगरानीमा सिकेका हुँदा एसएलसी परीक्षामा कम नतिजा निस्केको भान भए पनि मूल्यांकन गर्ने हो भने कम आँक्न मिल्दैन ।
राजभाई मानन्धर, प्रधानाध्यापक, चैतन्य मावि, बनेपा
सरकारी विद्यालयमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षक दरबन्दी मिलान नहुनु, विपन्न वर्गका अभिभावकका छोराछोरी मात्र सरकारी विद्यालयमा अध्यापन गराउनु, शिक्षा प्रणाली नै सुधार परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापकीय पक्ष सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय र अभिभावकले नियमित अनुगमनमा कमी भएकोले एसएलसी परीक्षामा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी कम उत्तीर्ण भएका हुन् ।
केदार घिमिरे, प्रधानाध्यापक महाँकाल मावि, बालुवा
एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये आधा भन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनु शिक्षक र विद्यार्थी नै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीहरु अल्छी भएका छन् । नियमित गृहकार्य नगर्नु, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नियमित निरीक्षण नहुनु जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ०४६ देखि हालसम्म ३ पटक निरीक्षण गर्न आएको छ । पढाउने शिक्षक राजनीति गर्दै हिँड्ने भए शिक्षकले विद्यार्थी पढाउने हो राजनीति गर्ने होइन । शिक्षक र विद्यार्थी दुवै मेहनती भएको खण्डमा मात्र एसएलसी परीक्षामा मात्र नभई जुनसुकै कक्षाका विद्यार्थीहरुले नै सफल हुन्छन् । सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र सरकारी विद्यालय नतिजा सुधार्न सक्छ ।
नरेन्द्र पाठक, प्रधानाध्यापक, महेन्द्र उच्च मावि, साँगा
एसएलसी परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु असफल हुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, सरकार अस्थिर विद्यार्थी कम मेहनती हुनु, विद्यार्थीलाई नियमित स्कुल नपठाउने अधिकांश विद्यार्थी विपन्न वर्गका अध्यापन गर्ने थलो सरकारी विद्यालय बन्नु, सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुका छोराछोरी नै संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गराउनु यस्ता विषयहरुलाई राज्यले कडा नीति ल्याएर सरकारी विद्यालयका छोराछोरी संस्थागत मात्र होइन सरकारी विद्यालयमा नै अध्यापन गराउन निर्देशित हुनुपर्छ । नभए कारवाही गर्नुपर्छ । सरकारी नुन खाने आफ्ना बालबालिकालाई चाहिँ संस्थागत विद्यालयमा अध्यापन गराउने किन नहुनु त एसएलसी परीक्षामा कम उत्तीर्ण ?
कुमार मानन्धर, प्रिन्सिपल, काभ्रे उच्च मावि, बनेपा
२०६८ सालको एसएलसी परीक्षामा ४७.१६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण हुनु शिक्षक र विद्यार्थी बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । लगनशीलता हुनुप¥यो, विद्यालय व्यवस्थापन सुधार, कार्य गुणस्तरीयता कायम गर्न नसकेकोले एसएलसीमा कम उत्तीर्ण भएका हुन् । यस्ता क्रियाकलापलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढ्नु जरुरी छ । राज्यको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
धु्रवप्रसाद शर्मा, प्रिन्सिपल, काभ्रे ईउमावि, पनौती
युसपालीको एसएलसीमा विगत वर्षको तुलनामा कम उत्तीर्ण हुनु भनेको शिक्षा नीति अव्यवहारिक, समयमा गाउँ गाउँमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसक्नु, गणित र विज्ञान प्रश्नपत्रमा त्रुटी, विद्यालय सेन्टरमा भएका कमजोरीको कारण यस्तो भएको हो । सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरु राजनीतिमा सक्रिय हुनु, जुन सरकार आयो, सरकार पक्षका शिक्षक संगठनहरु राजनीतिक प्रभावमा परी पुरा समय विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन नगराउने गरेकाले नतिजा राम्रो आउन नसकेको हो ।
रमेशकाजी श्रेष्ठ, प्रधानाध्यापक, सरस्वती मावि, बडालगाउँ
०६८ सालको एसएलसी परीक्षामा बढी विद्यार्थी असफल हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार सरकार हो । त्यसपछि शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवस्थापकीय कुशलताको कमी । समग्रमा भन्नुपर्दा परीक्षा प्रणाली नै अव्यवहारिक छ । सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट शिक्षक दरबन्दी मिलान गाउँ गाउँमा विद्यालयमा नियमित निरीक्षणको व्यवस्था निरन्तरता नभएकाले यस्तो भएको हो ।
राजेन्द्रकुमार लिम्बु, प्रिन्सिपल, प्रगति प्रभात उच्च मावि, बनेपा
शैक्षिक नीति स्पष्ट भए पनि शिक्षा नीति र नियमावली अनुसार शैक्षिक गतिविधि संचालन नहुनु । सामुदायिक विद्यालयमा संस्थागत विद्यालयका परीक्षार्थीहरुलाई उचित शैक्षिक परामर्शको कमी, शिक्षक र विद्यार्थी दुवैमा लगनशीलता कम हुनुले एसएलसी परीक्षामा नतिजा राम्रो आउन नसकेको हो ।
श्यामप्रसाद पाण्डेय्, प्रधानाध्यापक, आजाद उच्च मावि, बनेपा
०६८ सालको एसएलसी परीक्षामा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनु भनेको शिक्षा प्रणाली दोषी हो । सामुदायिक विद्यालउले चाहेर पनि राम्रोसँग अध्यापन गराउन दिँदैन । शिक्षकहरुलाई काजमा विभिन्न स्थानमा जनगणना, तथ्यांक संकलन गर्न पठाउने, विदाहरु बढी दिने । कपी परीक्षण गर्ने शिक्षकहरु भर्खर शिक्षामा प्रवेश गरेका, तल्लो तहका शिक्षकले कपी परीक्षण गर्नु जस्ता कार्यले गर्दा परीक्षामा बढी विद्यार्थी असफल भएका हुन् ।
रवि श्रेष्ठ, संस्थापक निर्देशक, बालबाटिका विद्या मन्दिर हाइस्कुल, बनेपा
०६८ सालको एसएलसी परीक्षामा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी असफल हुनु शिक्षा प्रणाली नै दोषी छ । त्यसमा पनि सरकारी विद्यालयका कारण यस्तो भएको हो । शिक्षक र विद्यार्थीहरु दुवैमा लगनशीलता र अनुशासनको कमी छ । देशको राजनीतिक अस्वस्थ बन्द, हड्ताल, शिक्षकहरुमा राजनीतिक प्रभावका कारण एसएलसी परीक्षाको नतिजा दिन प्रतिदिन खस्केको हो ।
रमेशप्रसाद सापकोटा प्रिन्सिपल, क्षितिज इङ्गलिस बोर्डिङ स्कुल, बनेपा
परीक्षाप्रति नेपाल सरकारको नीति नै प्रमुख कारक हो । यस वर्ष सेन्ट अप टेष्टमा फर्म रजिष्ट्रेशन गर्ने सबैलाई अनिवार्य पास गर्नुपर्ने सर्कुलर जारी गर्नु नै नेपाल सरकारको पूर्ण दोष छ । परीक्षा प्रणाली मर्यादित गर्नेलाई पुरस्कृत र अमर्यादित गर्नेलाई दण्ड गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीमा लगनशीलताको कमीका कारण एसएलसीको नतिजा खस्केको हो ।
आरके चौधरी, प्रिन्सिपल, नाइटिङ्गेल एकेडेमी उच्च मावि, जनागाल
सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयको जिम्मेवारी छ । सरकारी विद्यालयको गाउँ गाउँमा शिक्षक दरबन्दी पु¥याउन नसक्नु । शिक्षकहरु राजनीतिक झण्डा बोकेर हिँड्ने कार्यको अन्त्य नभएसम्म यो प्रक्रियाको अन्त्य हुँदैन । एसएलसी परीक्षामा जुनै वर्ष पनि खस्कन्छ । विद्यालय प्रशासनको कमजोरी छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभिभावक, विद्यार्थीबीच समन्वयको अभावको कारण ०६८ सालको एसएलसी परीक्षाको नतिजामा कमी आएको हो ।
भगीरथ अधिकारी, प्रिन्सिपल, बेलर इन्टरनेशनल एकेडेमी उच्च मावि
०६८ सालको परीक्षाको नतिजालाई मध्यनजर गर्ने हो भने विद्यालयहरुले ६ महिना पनि राम्रो अध्ययन गराए कि गराएनन् भन्ने भान हुन्छ । नेपाल सरकारको शिक्षा प्रणालीको पनि दोष छ । हाम्रो सामाजिक परिवेश एलएलसी परीक्षामा चोरेर पास गर्ने भन्ने मान्यता रहेको र परीक्षा बोर्डले चोर्छन् भन्ने मान्यताले परीक्षा मर्यादित गराउँदा विद्यार्थीको मनोभावनामा असर भएकोले यसो भएको हो । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी शिक्षक लगनीशलता र मेहनतीमा कमी हुनुले यस्तो भएको हो ।